Zavamiaina bitika. BNL Ministries - mg31
Rehefa nanolo-kevitra momba ny fampianarana ny evolisiona Darwin, dia nihevitra fa ny sela dia tena rafitra tsotra. Ary ny fahitany izany dia tahaka ny karazana trano, izay eo amboniny ny zavamaniry rehetra sy ny biby no natao.Marina ny azy fa ny fiainana rehetra dia mifototra amin'ny sela, fa izy rehetra dia mety ho samihafa, ary ny sela dia tsy rafitra tsotra mihintsy. Izany dia tena sarotra. Mikraoskopy elektronika, mahery vaika an'arivony maro ka na ireo mpijery mahay indrindra aza dia namela mpikaroka handinika ny sela. Afaka maka sary sy rakitsary (video) ny zava-mitranga izy ireo.
Ny vokany dia manaitra. Ohatra: Ny sela iray dia manana andiana milina izay mampiasa asidra amine manamboatra proteina maro isan-karazany. Ireo proteina ireo no mahatonga ny sela sy ny milina tsirairay. Ary indraindray ny sela tsy maintsy manao milina mba hahatonga ny milina ilainy! Ny sela mihitsy aza dia manana kamiao (vita ihany koa amin'ny proteina) izay mitondra proteina hafa amin'ny toerana ilàna azy ireo. Ireo kamiao ireo dia mandeha amin'ny zavatra toy ny lalana ao anatin'ny sela, vita amin'ny proteina izy rehetra. Ary ny zavatra rehetra dia hitan’ny solosaina avy amin'ny ADN.
Eritrereto izany rehetra izany toy ny toeram-panorenana, na orinasa manamboatra fiara izay mifandray ireo akora miaraka, amin'ny fomba tena mirindra mba hamokatra fiara na trano. Ny momba azy rehetra dia tsy maintsy vokarina ary alefa any amin'ny toerana misy azy amin’ny fotoana fampidirana. Izany no mitranga amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny sela tsirairay. Izany rehetra izany dia mitranga amin'izao fotoana izao amin'ny zava-manan'aina rehetra, anisan'izany izaho sy ianao ary ny nanaovana antsika dia sela an'arivony tapitrisa. Selan’ny taolana, rà, hoditra, sy ny sisa. Izany rehetra izany dia mitaky fitantanana mari-pototra sy fahasarotana be.
ADN Double Helix.
Ny drafitra ho an'ny rafitra sy ny endriky ny proteina, ny fanomanana ny fanorenana ny milina, kalitao fanaraha-maso, ny fahasalamana sy ny fiarovana, ary ny toerana fitantanana dia ao amin'ny ADN. Ny ADN dia tsy ny solosaina ihany, fa ny lamin’asa ihany koa. Izany no loharanon 'ny fanazavàna sy toromarika.
Misy olana maro ho an'ny mpino ny evolisiona amin’izany. Ny evolisiona dia mifototra amin'ny kisendrasendra, fiovàna kisendrasendra ao amin'ny fiovàn’ny tontolo iainana. Satria ny fiainana rehetra dia sela, ny sela rehetra vita sy nataon’ny proteina, ary ny proteina dia vokarin’ny torolalana avy amin'ny kaody solosaina ADN ka tsy misy hidiran’ny tonga ho azy. Ary raha misy zavatra tsy mety mandeha, ny rafitra mazàna dia mitady handrava ny proteina tsy mahomby.Ny famindrana, iray amin'ireo fomban’ny evolisiona dia mitranga indraindray. Kanefa ny famindrana fantatra rehetra dia manimba amin'ny fomba iray. Ary ny ADN manana ny "Fanitsiana Tsipelina" manitsy izay tena diso. Noho izany ny fanantenana ny fiovàn’ny ADN hanova ny proteina ho sela, mba ho tonga zava-manan'aina dia kely nohon’ny iray raha ampitahana amin’ny ataoma rehetra eo amin'izao rehetra izao. Ary ny maha hafahafa ny ADN mitranga kisendrasendra dia tena lehibe tsy mampino.
Fa ny faharoa, ary angamba ny olana lehibe indrindra ho an'ny mpino ny evolisiona dia ny ango-drakitra, na ny vaovao, ao amin'ny ADN. Ny zava-misy dia tsy azo foronina amin’ny dingana kisendrasendra. Ny dingana kisendrasendra dia mitovy amin’ny mandatsaka soratra maro eo ambony latabatra ary manantena, amin'ny farany, mba hahita "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany lahy Tokana" eo amin'ny tsipika mahitsy tsara. Tsy hitranga izany! - Na oviana na oviana.
Saingy ity no tena mahaliana. Isika mahalala izay nihavian’ny tahirin-kevitra na ny fanazavàna. Hitantsika ny bokin’ny telefaona. Feno angon-drakitra ao anatiny. Fantatsika fa tsy afaka hitranga amin'ny kisendrasendra izany. Ny adiresy dia marina, ary, raha ampanenona ny laharana an-tariby, dia afaka miresaka amin'ilay olona isika. Ny fanazavàna ao amin'ny bokin’ny telefaona dia olona no nametraka azy, tamin’ny alalan’ny fisainana. Noho izany, ny hany loharanom-baovao fantatra dia avy amin’ny saina. Ny sela rehetra ao amin’ny ADN dia manana loharanom-baovao betsaka. Ary satria isika vita tamin’ny sela dia tsy maintsy nisy saina lehibe noho isika nametraka izany tao.
Inona ny kisendrasendra?
Ny mpahay siansa milaza amintsika fa misy fepetra 501 na zavatra ilaina ho an'ny fiainana avo-lenta mba hisiany.
Izany dia hevitra tsy mitombina.
Nanao kajy izy ireo fa ny kisendrasendra mety hitrangan’izany rehetra izany dia iray anatin’ny folo raha averina in- 311.
Milaza amintsika ihany koa izy ireo fa ho an'ny angon-drakitra ara-tsiansa, na inona na inona kely noho ny 1 ao anatin'ny 10, raha averina in-70, dia kely dia kely ka azo tsy jerena akory.
Izany no kisendrasendra ny amin’ny fananana fepetra ilaina ho amin'ny fiainana. Tsy ny fiainana akory.
Izany ve tsy manaporofo ny “Andriamanitra Mpamorona”?
Ny Webmaster nilaza…
Ity pejy ity, amin'ny ampahany, dia fanomezam-boninahitra ny Rahalahantsika Richard Oliver, tamin’ny fandraisana anjara tamin’ny ireo teniny feno fahendrena.
Rahalahy Richard dia lasa any amin'ny Tompo, izy tiany, notompoiny, ary noresahiny ny momba Azy.
Mahatsiaro fahabangana ny ekipan’ny BNL.